आफ्नो आँखा कसरी सुरक्षित राख्ने
ाम्रो आँखा हाम्रा लागि अति अनमोल चीज हो । यदी आँखाविनाको संसार कोहीले चाहादैन । जसरी हामी अरु शरिरको राम्रोसँग हेरचाह गर्छौ त्यसरी नै आँखाको ख्याल गर्नु आवश्यक रहन्छ ।... पूरा पढ्नुहोस्
िश्वविद्यालयमा कुन विषय पढ्ने विद्यार्थीहरुले धेरै सेक्स गर्छन् होला त ? कुन विषय पढ्ने विद्यार्थीहरुले थोरै सेक्स गर्छन् ? यो सबै चासोको विषय हुनसक्छ । हालै एउटा अनुसन्धान टोलीले यसबारे निष्कर्ष निकालेको छ ।... पूरा पढ्नुहोस्
लेगक्रस गरेर बस्दा के हुन्छ थाहा पाउनुहोस्
रेकको आफ्नो आफ्नो बस्ने तरिका हुन्छ । प्राय जसो मानिसहरु लेग क्रस गरेर बस्ने गर्छन् । यो बस्ने तरिकाले शरिरलाई हानी गर्छ । लेग क्रस गरेर बस्नाले तपाईलाई बिमारी समेत बनाउन सक्छ । यसरी बस्नाले शरिरमा यस्ता हानीहरु हुने गर्छ ।... पूरा पढ्नुहोस्
क मानिसको ८०० बच्चा कसरी हुनसक्छ ? हरेक हप्ता कसरी कसरी पिता बन्न सक्छ ? यो कुरा सुनेर तपाई अचम्ममा पर्नुभयो होला ? कुरा यस्तो रहेको छ ।... पूरा पढ्नुहोस्
ाम्रो स्वास्थका हिसाबले विहान हिड्नु धेरै नै फाइदाजनक हुन्छ । विहान हिड्ने बानीले हाम्रो शरिर स्वस्थमात्रै राख्दैन कि यसले धेरै रोगहरु बाट पनि बचाँउछ । अझै हामी विहान विहान हरियो घाँसमा खालि खुट्टाले हिड्ने... पूरा पढ्नुहोस्
थाहा पाउनुहोस् भुइँमा बसेर खाना खानुको फाइदा
ामान्यतया यो भन्ने गरिन्छ कि समय सँगसँगै आफुलाई बदल्नुमा फाइदा हुन्छ तर, केही चिजहरु धेरै पहिले देखि नै समय सँगसँगै नबदलिइकन आएका छन् ।... पूरा पढ्नुहोस्
शाकाहारीहरुले पढ्नै पर्ने
ानव शरिरको वृद्धि विकासमा प्रोटिनको भुमिका महत्वपुर्ण हुन्छ । प्रोटिन हाम्रो शरिरको कोश र तन्तुको मर्मतका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ ।... पूरा पढ्नुहोस्
यसकारण कण्डम मन पराउँदैनन् युवतीहरु-अनुसन्धानकर्ता
ान्नु आवश्यक छ कि सेक्स जहिले पनि सेफ रुपमा गर्नुपर्छ । त्यो पनि विवाह अगाडि । असुरक्षति यौनका कारण समस्या धेरै आउने हुँदा कण्डमको प्रयोग गर्न राम्रो मानिन्छ । सेफ सेक्सका लागि कण्डम भरपर्दो अस्थायी साधान समेत मानिन्छ ।... पूरा पढ्नुहोस्
कतै तपाईको घुर्ने बानी त छैन !
दी तपाईलाई सुत्दाखेरि घुर्ने बानी छ भने सावधान हुनुहोस् । सुत्दाखेरि घुर्ने बानीका कारण सास लिनमा आउन सक्ने समस्याका कारण ज्यान जाने खतरा पनि उत्तिकै रहेको हुन्छ । डाक्टरका अनुसरा स्लिप एप्रिया एक खाले समस्या हो ।... पूरा पढ्नुहोस्
होला त मेस्सीलाई कारबाही !
िश्व कप छनोट चरण अन्तर्गत गतसाता अर्जेन्टिनाले चिली विरुद्धसँग १-० को जित दर्ता गर्यो। उक्त खेलमा अर्जेन्टिनाका कप्तान लियोनल मेस्सी रेफ्रिहरुसंग केहि असन्तुष्ट देखिएका थिए ।... पूरा पढ्नुहोस्